Sheekh Cumar Faaruuq - Wikipedia
(1949-05-21) Maajo 21, 1949 (Wuxuu jiraa 70)[Lama hubo]
Carmaale, Soomaali Galbeed, Itoobiya
Maarso 8, 2011
Waddaad, Culimo-diin, Barre, Qoraa
Sheekh Cumar Faaruuq (Af-Carabi: شيخ عمرالفارؤق) wuxuu ku dhashay degmada Qooxley oo Qallaafe iyo Qabridaharre u dhaxeysa, halkaasi oo magaceeda caanka ahi yahay “Carmaale” . Waxa uu dhashay sida loo sheegay goor barqo ah, maalin Khamiis ah, xilli dayr ah, sanadkii 1949kii bishase lama yaqaan.Carmaale waxa dariiqa diimeed ka hayey aabihiis Xaaji Cabdi-Suldaan, dariiqadaasoo. ka koobanayd dugsi Quraan oo uu hayey wadaad la oran jirey macallin Cusmaan Macallin Dhicis, iyo cilmiga oo isagu uu akhrin jirey.Sheekh Cumar-Faaruuq wuxuu ka dhashay qoys diineed. Sheekh Cumar Faaruuq, Abiihiisa Xaaji Cabdi Suldaan Xaaji Maxamuud waxa uu dhintay isaga 3-jir ah, hooyadiis Caasho Sheekh axmed Guurena waxay xijaabatay markuu shan sano jiray, qur'aanka waxuu dhameeyey oo uu xafiday todobo jirkiisii.
3 halkii uu cilmiga kuaqrin jiray sheekha.
4 Waayihii dambe
5 Geeridii Sheekh Cumar Faaruuq.
Sheekha dugsigii 1aad ee Qur'aanka wuxuu galay isagoo 5 jir ah, dugsigii labaad isaga oo 9 jir ah.Macallinkiisu wuxuu ahaa abtigii hooyadii la dhashay oo macallin Xuseen sh. Axmed-guure la yiraahdo. Dugsigaasaa isagoo 12 jir ah uu quraanka ku dhameeyey, hase yeeshee dusha kama qaban. dugsigii 3aad isagoo 14 jir ah ayuu galey. Dugsigaas ayuu Cumar-Faaruuq quraanka dusha uga qabtey isagoo 14 jir ah. Dabadeed qur’aankii waa uu hilmaamay, sababtuna waxay ahayd isagoo ku mashquulay shicir wax la oran jirey oo dhaqan u ahaa qoyska uu ka dhashay ah ilaa uu shicirkii dusha ka qabtey.Markaa qur’aanka Sh. Cumar-Faruuq 3 goor buu dhameeyey. Ka dibna isagaaba macallin-dugsi noqdey, markaasoo uu 14 jir ahaa. Mar wuxuu ku qabtey dugsi magaalada Qallaafe isaga oo kutubta raacda oo xer ah, una dhiga carruurta reerkii uu markaas uu la noolaa. Reerkaasi oo uu lahaa nin la yiraahdo Olol Diinle, waxay saaxiib ahaayeen aabahiis. Dugsigii labaadna wuxuu u qabtey niman reer Ugaas la yiraahdo, meel la yiraahdo Maraacaato. Dugsigaas labaadna dugsi buu kiciyey.Sheekh Cumar Faaruuq Cilmiga isaga oo 14 jir ah ayaa Fiqiga loo billaabay, Kitaabka Safiinatu Salaat ayaa waxa u billaabay Sh. Cusmaan-Jire Sh. Xuseen-Dhaqane.Sheikh wuxuu ka dhashey qoys diimeed Waana Asharaaf Jannadii fardowsa allah haka waraabiyo asga iyo anagaba dhamaanteen.
Naxariistii Jano alle haka waraabiyee Sheekh Cumar Faaruuq waxa uu ka soo jeeda qoys culimo ah, Meelaha uu cilmiga ka raacday Shiikha waxaa ka mid ahaa Masjidka Marwaas ee Magaalada Muqdisho oo isagoo xeroow ah uu lixdameeyadii yimid kana raacday kutubta, Shuyuuqdii soo waxbartayna waxa ka mid ahaa Sheekh Ibraahim Suuleey, iyo sheekh Cabdikariim Sheekh Khaliif oo isagana tafsiirka uu ka bartay.
Waxbarashada[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Dhinaca luqadda Carabiga guriga ayaa loogu akhrin jirey, niman walaallihiis ah oo ay ka mid yihiin Sh. Shaafici Xaaji Cabdi-Suldaan iyo Sh. Murshid ayaa si toos ah ugu akhriyey Naxwaha, Ajruumiga, Camriidiga, Mulxaha, Mutamimka, Qadriga iyo ilaa Alfiyaha. Qaybta Sarfiga waxaa u akhriyey wadaad awowgiis ah oo la oran jirey Xaaji Maxamuud Xaaji Cabdulle, Tafsiirka waxaa u khriyey wadaad la dhihi jirey Sh. Yuusuf muddadaasoo uu magaalada Qallaafe xer ku ahaa.Cilmiga Xadiiska ayuu markaa nin Sh. Ibraahim Muxumed Cali (Sh.Ibraahim Suuley) ka akhristay. Dabadeed Cumar-Faaruuq wuxuu galey madrassa ku taalley Xamar oo la oran jirey “Machadu-Diin bil-Muqdisho” oo ay Masaaridu dhigi jirtey. Halkaasi waxa uu ku dhameeyay dugsiga dhexe. Dugsiga sare waxa uu ku dhameeyay Machad-Altadaamun al Islaamiyah bil-Muqdisho oo ku oolli jirey lambar afar oo ay sucuudigu maamuli jireen. Kadib waxa uu galay Jaamacadda Medina , kulliyadda “Al-Dacwa wa-usuula-Diini”, markaasoo taariikhdu ahayd 1975, wuxuuna ka qalin-jabiyey 1979kii.
Sheekh Cumar Faaruuq Jaamacadda markii uu dhameeyey waxa uu bilaabay faafinta diinta Islaamka isagoo xaruntiisu tahay Sacuudiga. Waxa uu duubay cilmi fara badan oo ay ka mid yihiin kutubo badan oo ilaa iyo 12 kitaab ah oo tafsiirka ah iyo siirada oo dhowr kitaab ah, manhajul-Muslim, taysiirul-aclaam, Arbaciinu-Al-Nabawi iyo kutub fara badan oo noocaas ah intii uu joogey Sucuudiga. Kutubadaas ayaa gaarey Yurubta iyo Ameerikaba. Kutubtaas dartood baa dadkii ku noolaa dibedda ay jecleysteen inay arkaan, markaasoo uu 1993kii bishii July 12keedii uu Shiikhu tegay dalalka Sweden, Norwey, Danmark, Finland, Swizarland, Ingiriiska oo uu ka sameeyay muxaadaraad iyo duruus kaleba.Kadib sannadkii 1996 ayuu ku noqday Soomaaliya, waxaanu tagey magaalooyinka Muqdisho, Marka, Qoryaaley, Afgooye, Wallaweyn, Buurhakaba, Beydhabo.
Shiikh Cumar faaruuq inkastoo uu diinta guud ahaa si weyn u yaqiinay, hadana waxuu ku caan baxay tafsiirka qur'aanka kariimka, waxuuna ahaa sheekhii ugu horeeyey ee taariiqda soomaalida ee cod ahaa tafsiirka cajalado ugu duubay sanadkii 1982-oo safaarada soomalida ee dalka Sacuudiga uu ku qabtay album-kii ugu horeeyey, oo tarjumada qur'aanka kariimka ahaa
halkii uu cilmiga kuaqrin jiray sheekha.[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Misaajidii uu tafsiirka sida weyn uga aqrin jiray sheekha waxa ka mid ahaa Misaajidka Ibraahim uunlaaye ee xaafada wadajir ee magaalada Moqdisho, waxaana sheekha la sheegaa in culimada kale ee Soomalida uga duwanaa xaga tafsiirka qur'aanka isagaa ahaa nin afsoomaliga aad u yaqaanay, balaaqo ama hadal deeqsiintiisuna ay ahayd mid soo jiidasho leh, ama wax fahamsiinta aad ugu fiicnaa, waxaana tusaale loo soo qaadan karaa kumanaan cajalado ah, oo Soomaali badan oon waligood shiikha arkin ay hadana cilmiga tafsiirka ka barteen maqal ahaan cajaladdaasi, kuwaasoo ku taxnaa cajaladaha misaajidda laga shido.
Waxaa kaloo jira cajalado uu sheekhu kaga hadlay cilmiga axaadiista,fiqiga,iyo naxwaha oo iyagana afsoomali ku duuban.
Sheekha oo mudadan dambe ku noolaa dalka Sacuudiga waxa uu ka baxay jaamacada madiina al Munawara gaar ahaan kuliyada dacwada, ama daacinimada,waxaana Cumar faaruuq lagu tilmaamaa inuu ahaa Caalim qur'aanka aad u yaqaanay tafsiikiisa, shareecada islaamkana meel fog ka gaaray.
Xertii ka aflaxday aqoonta iyo mowlacyada sheekh Cumar Faaruuq waxaa ka mid ahaa Shiikh Nuur Baaruud.
Waayihii dambe[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Sheekh Cumar Faaruuq intii ka dambaysay burburkii Soomaaliya waxa uu waday barnaamij ballaaran oo ka kooban seddex qaybood. Kan hore waa midaynta culimada diinta ku abtirsada, mid mid ama xisbi xisbi ha ahaadeene;Kan labaad (Tawjiihul Uzucamaa) la talinta iyo toosinta ragga qabqablayaasha ka ah siyaasadda Soomaaliya; iyo qaybta seddexaad (Tadqiiful-Ummah) oo ah waxbaridda ummadda Soomaaliyeed, oo siduu sheegay Shiikhu “goorahan dambe Ilaahay hanuun siiyey” sidii looga haqabtiri lahaa diinta, hadday tahay akhriska kutubta ama wacdi iyo waano.
Sheekh Cumar Faaruuq waa mufti ay si wayn bulshada Soomaaliyeed uga haybaysato, waxqabadkiisuna uu ka muuqdo dalka gudihiisa iyo dibeddiisaba, iyadoo cilmigiisa dunida oo dhan laga wada raacdo. Dalka Sucuudiga oo uu degganaa tan iyo 1974kii, waxa uu si toos ah uga akhrin jiray kutubta, kuwaasoo cajaladaha laga duubo muxaadarooyinkiisa ay soo gaari jireen dunida inteeda kale. Laba goor ayuu geeridisii kahor Soomaaliya tegay Sheekh Cumar Faaruuq, halkaasi oo uu ka bilaabay tafsiir xaafadda km 4, duruustaasi oo maqal iyo muuqaalba laga duubay si mar walba loo isticmaalo faafiddooduna u fududaato. Waxa uu islamarkaa Jimcayaasha jeedin jiray muxaadaro looga kala yimaado Muqdisho iyo magaalooyinka ku hareeraysan sida Afgooye, Marka, iyo Qoryoolay.Tirada ka soo qaygasha dhagaysigiisa waxa lagu qiyaasay 4000 oo qof markiiba, iyadoo celcelis ahaan ay 1500 oo ka mid ahi haween yihiin. Sheekh Cumar Faaruuq booqashada uu Toronto ku tagay waxa ay ka dambaysay codsiyo iyo martiqaad ay bulshada Soomaaliyeed ee Kanada u fidisay in uu u yimaado.Intii uu ku sugnaa Toronto waxa uu ka akhriyey laba risaalo oo kala ah “al-caqiidal-Waasidiyah” iyo “al-caqiidal daxawiyah”. Waxa kaloo uu bixiyey muxaadarooyin kale oo ay ka mid yihiin kuwo dumarka u gaar ah iyo kuwo ragga u gaar ahba.
Geeridii Sheekh Cumar Faaruuq.[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
sheekha waxa uu kugeeriyooday magalada barakaysan ee makkah almukaramah ee dalka sucuudiga, 8 marso sanadkii 2011ka
Sheekh Cumar Faaruuq xaaji Cabdi Suldaan waxuu ifka kaga tagay afar xaas iyo 15 caruur ah.
Ilaahay qabriga ha u waasiciyo, Sheekh Cumar faaruuq Xaaji Cabdi suldaan.
↑ Kitaabtii uu qoray Sheekh Cumar Al-Faaruuq
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Sheekh_Cumar_Faaruuq&oldid=199189"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga badelay 06:37, 24 Febraayo 2020.